अनिशा श्रेष्ठ शुक्रबार​, फागुन २४ २०७५
हामी समाजका चोकचोकमा समानताको नाराको जुलुस लगाउँदै हिँड्छौ । यस्ता नारा–जुलुस पनि अब त महिला दिवस जस्ता दिवस आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक दलका महिला संगठन भोटमा मात्र सीमित छन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा महिलाले ओगटेको छ । आधा हिस्सा ओगट्नुको अर्थ सामाजिक जीवनमा के–के फरक पर्नुपर्ने हो ? यहाँका सार्वजनिक कार्यक्रम होस् या सार्वजनिक महत्व राख्ने कुनै पनि विषय, संविधान विरोधी पुरुषवादी सोंच नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा महिलाले ओगटेको छ । आधा हिस्सा ओगट्नुको अर्थ सामाजिक जीवनमा के–के फरक पर्नुपर्ने हो ? यहाँका सार्वजनिक कार्यक्रम होस् या सार्वजनिक महत्व राख्ने कुनै पनि विषय, त्यहाँ पुरुषकै हालीमुहाली जारी छ ।
कोही महिला सार्वजनिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न खोजे भने पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जोडतोडका साथ मौलाउँदो छ । कतिले छुच्ची भएको त, कतिले सोमत नभएको आइमाइ भनेर खिसिटिउरी गर्ने प्रवृत्ति छ । अझै घरमा काम नपाएको, बिग्रिएको वा उत्ताउलीसमेत भन्न भ्याउँछन् । आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हाम्रा सार्वजनिक जीवनमा हुनुपर्ने मान्यता राख्ने र यसका लागि योग्यता र क्षमताका कुरा धेरै उठ्ने गर्छन् । के कोही पुरुष सार्वजनिक क्षेत्रमा आफ्नो योग्यता पुगेर नै गएका हुन् त ? उनीहरु आफूलाई के ठान्छन, जो सबै क्षेत्रमा आफूहरु मात्र हुनुपर्ने विचार गरिरहेका हुन्छन् ।
हामी समाजका चोकचोकमा समानताको नाराको जुलुस लगाउँदै हिँड्छौ । यस्ता नारा–जुलुस पनि अब त महिला दिवस जस्ता दिवस आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक दलका महिला संगठन भोटमा मात्र सीमित छन् । कम्तिमा महिलाको उपस्थितिका बारेमा बहस र छलफलसमेत नचलाउने अवस्थामा आइपुगेका छन् । बिडम्वना त यहाँ हुन्छ कि दिनभर महिलाको पक्षमा भाषण दिनेहरु नै घरमा सजाउने गुडियाको दर्जामा राख्छन् । अझै पनि महिला दोस्रो दर्जाको व्यवहार भोग्न सीमित छन् ।
अब हामी महिलाले पनि हिसाब गर्नुपर्ने दिन आएको छ । कुनै अमुक पार्टीले वा कसैले दिएर भन्दा पनि हाम्रो अधिकारका लागि हामी आफंै जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको छ । घरभित्र होस् या बाहिर समाजका हरेक ठाउँमा महिला भए नभएको विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानले राज्यका सबै तह समावेशी हुनुपर्ने र कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । संविधानले गरेको यो व्यवस्था पालना नगरी कुनै पनि ठाउँमा पुरुषको एकलौटी अब गैरसंवैधानिक हुन्छ । के उनीहरु महिलालाई हेप्न वा देखाउन गैर संवैधानिक काम गर्न तयार भएका हुन् ? अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना ।